Maitiro ekurekodha mafoni paGoogle neGoogle Runhare Android ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro ekurekodha mafoni pane Android neGoogle Runhare
Maitiro ekurekodha mafoni pane Android neGoogle Runhare, vhezheni 44 yeGoogle Runhare inotanga kuratidza zviratidzo zvakajeka zvekusvika kwekuuya kweiyo kufona matanda. Kune vasina kudzidza, kana chimiro chichiita, ese mafoni eApple akashongedzerwa neGoogle Runhare application anokwanisa kurekodha mafoni anouya uye anobuda.
"Nekushandisa iko kurekodha kufona, une basa rekutevedzera mitemo inoshanda maererano nekufona. Ndokumbira utarise kuti masimba mazhinji anoda mvumo yemapato ese ari maviri ekunyoresa kwakadai.
Dana kurekodha kuburikidza Google Runhare iri nhanho imwe kubva pakuwanika.
Kusimbisa zvese, izwi risati ranyorwa rinotaurirana kune ese mapato kutanga kwekurekodha yekufona nekukurumidza bhatani «Rekodhi«. Mushure mekufona kwapera, iko kutora kweiyo hurukuro ichave ichiwanikwa padanho rerogi, ine mini controller kuti utange kufona ichitamba, kudzora vhoriyamu yayo, kana kuigovana se .wav faira.
Zvakare pamwe sunga kugona kwe Google sahwira kunyora otomatiki zvirimo zvekufona foni, asi parizvino hapana rumwe ruzivo rwekuti basa racho rinoshanda sei.
Sezvo iri riri basa isu tichikwanisa kutsanangura sebasa riri kuenderera mberi. Kuvapo kwetambo dzetambo kunoratidza kuti basa rakagadzirira kuvhurwa, iro rinosimbiswawo nekuvapo kwezvinhu zvese zvemifananidzo (mifananidzo, UI, nezvimwewo).
Big G inogona kunge iri kupedzisa chikamu chekuburitsa chechinhu uye chichaita kuti chiwanikwe mumavhiki anotevera. Ngatisakanganwei, zvakadaro, kuti kurekodha kwekufona kunogona kusvika panguva dzakasiyana kubva nyika kuenda kune imwe nyika uye kubva ku Smartphone kuenda ku Smartphone.
Maitiro ekuvandudza Google Runhare
Basa racho rinoratidzika kunge riripo mu beta 44 yazvino vhezheni ye Google Runhare, asi kana uchida iwe unogona zvakare kuyedza kuisa iyo beta uye edza rombo rako. Kuti uwane chiteshi chekuyedza, unofanirwa kubaya pane iyi link uyezve pane iyi link «Iva tester», kana batanidza bheji re Play Store uye pfugama pasi kusvika pasi peji.
Mashandisiro ekushandisa Google Kubhadhara kubhadhara muzvitoro uye online neApple
Maitiro ekugadzirisa Google Mubatsiri zviziviso pane Android